Abanye abasebenzisi bafumana isilumkiso "sokugcina sigcwele" ngempazamo emva kokuhlaziya kwi-iOS 15 | IPhone iindaba
Abanye abasebenzisi bafumana isilumkiso "sokugcina sigcwele" ngempazamo emva kokuhlaziya kwi-iOS 15
UToni Cortés | 22/09/2021 20:00 | iOS 15
Kubonakala kungakholeki, kodwa ukukhupha iinguqu ezininzi ezingapheliyo zokugqibela ze-beta zabo bonke abasebenzisi, amaxesha ngamaxesha «bug»Kuhlobo lokugqibela lolunye uhlaziyo olubalulekileyo lwesoftware ka-Apple. Kwaye kuyakuba kukuba bengakhange bavavanywe, basilele kwaye bahlengahlengiswe ngentengiso nauseam.
Ewe kubonakala ngathi kwi-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15 impazamo ayihoywanga ngabaphuhlisi, kuba abanye abasebenzisi sele beqalisile ukukhalaza ukuba emva kokuhlaziya ii-iPhones kunye nee-iPads zabo kule veki, bafumana isilumkiso «Ukugcinwa kwe-iPhone (okanye i-iPad) phantse kugcweleXa eneneni banendawo yokugcina eninzi simahla.
Abasebenzisi abaninzi be-iPhone kunye ne-iPad baxela kwinethiwekhi yoluntu impazamo enomdla ebonakalayo emva kokuhlaziya izixhobo zabo iOS 15 o I-iPadOS 15. Kuyavela ukuba isilumkiso sibonakala silumkisa ukuba ukugcinwa kwesixhobo sele kugcwele, xa kungenjalo.
Kwaye ngelishwa, awukwazi "ukucima" esi silumkiso kwiscreen seSeto, kuba isixhobo sakho sinendawo enkulu yasimahla, kodwa i-iOS icinga ukuba ayisiyiyo. Nokuba ucima enye into kwaye ukhulule indawo, isilumkiso sihlala sivela ngokungalunganga.
@AppleSupport Hee, uphuculelwe i-ios15 kunye nokugcina ukugcinwa phantse kwesaziso xa kukho indawo engaphezulu kwe-10GB? Ibug ndingayicinga? Ngaba ikhona indlela yokulungisa le pic.twitter.com/EZ81OljR52
-Ishan Prakash (@ishanprakash) Septemba 21, 2021
Iqela leNkxaso yeApple sele liyazi ibug. Okwangoku, konke abakwenzileyo kukucebisa abasebenzisi abahlangabezana nale ngxaki qalisa kwakhona izixhobo zakho, kodwa kubonakala ngathi isisombululo esinjalo asinakwenzeka kwiimeko ezininzi, kwaye isilumkiso "ukugcinwa kwe-iPhone phantse kugcwele" kuyaqhubeka ukuvela.
Ngaphandle kwamathandabuzo eCupertino sele besebenza ekusombululeni le bug encinci, kwaye siqinisekile ukuba kungekudala bazokwazisa uhlaziyo oluncinci Zombini i-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15 ukusombulula ubumdaka, kwaye ngenxa yoko ziphele isilumkiso esikruqulayo sokuba uphelelwa yindawo yokugcina simahla xa kungenjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Abanye abasebenzisi bafumana isilumkiso "sokugcina sigcwele" ngempazamo emva kokuhlaziya kwi-iOS 15
IPodcast 13x05: Ikhamera, ibhetri kunye nescreen, izizathu zokutshintsha i-iPhone.
Uvavanyo lwe-Anker PowerCore 5K Magnetic Battery